စစ်ကောင်စီ့ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက အခုထိ တစိုက်မတ်မတ်သွားနေတဲ့ သတိပြုစရာဗျူဟာရဲ့ ဦးတည်ချက်… – Shwe Nay Chi
စစ်ကောင်စီ့ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက အခုထိ တစိုက်မတ်မတ်သွားနေတဲ့ သတိပြုစရာဗျူဟာရဲ့ ဦးတည်ချက်…
ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်၊ မအလတို့ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက အခုထိ တစိုက်မတ်မတ်သွားနေတဲ့ ဗျူဟာ ကို ပြောချင်တာရယ် … သြဇီနဲ့ စကားပြောတော့ ဒုချုပ်စိုးဝင်း က ပိ တ် ဆို့မှုတွေကို အလေးမထားဘဲ အရင်ကလည်း အတွေ့ အကြုံရှိခဲ့သလို မိတ်ဆွေနိုင်ငံအချို့နဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်သွားမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ကမ္ဘာမှာ အဲဒီလိုနိုင်ငံကို တံခါးပိတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးတဲ့
အထီးကျန် နိုင်ငံတွေလို့ ခေါ်တယ်။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ မြောက်ကိုရီးယား ပေါ့။.. မနေ့က ကျုံပျော် ဖြစ်စဉ်ကို အာဆီယံက အဖွဲ့တွေရောက်နေချိန်မှာကို ဖြစ်တယ်၊သတင်းကလည်း ကမ္ဘာကိုတန်းပြန့်တယ်။အခုလည်း ဒီမောဆိုမှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ကို လ က် န က် ကြီးနဲ့ထုတယ်၊စာသင် ကျော င်းလို နေရာမျိုးတွေ မီးရှို့ တယ်။အဓိပ္ပာယ်က UN/US/EU မပြောနဲ့ အနီးဆုံး သူ့ကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့… အာဆီယံဆီကတောင် Legit_imacy ရဖို့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့သဘောပဲ။NLD ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိ မ် တယ် ဆိုတာ
သက်သေပြဖို့ မဲစာရင်း အတုတွေ လုပ်ပြီးပြီလို့ သိရတယ်။ပြီးရင် NLD ရဲ့ ထိပ် တန်းခေါင်းဆောင်တွေကို နှစ်ရှည် ထော င် ချ မယ်။NLD ကို ဖျ က် သိ မ်း မယ်၊ ပြီးရင် ၂၀၀၈ ခြေဥကို…. လိုသလောက်ပြင်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကို PR စနစ်ပြောင်းမယ်။ ပြီးရင် PR ရွေးကောက်ပွဲကို YMBA ကနေဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပြီး သမ္မတနေရာကို ကူးမယ်။ ဒါ သူတို့ Road Map … မအလ ဟာ
ဒီရက်ပိုင်း ဆပ်ပြာလိုမျိုး ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်တာ ကို လိုက်ကြည့်တ ယ်။အရင်ရက်က ဆပ်ပြာ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်၊ နို့မှုန့် တွေကို.. မြဝတီဘက်ကနေ အဝင် ပိ တ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? တကယ်တော့ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ၂၀၁၀-၂၀၂၁ ကြားကာလနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေကို အင်တို က် အား တို က် သုံးခွင့်ရခဲ့တယ်။အခု အထီးကျန် နိုင်ငံဖြစ်ပြီဆိုရင် အရှားပါးဆုံးဟာ နိုင်ငံခြားငွေပဲ၊ အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြားငွေ ကို စစ်ရေးအတွက်၊… သူတို့ အကျိုးစီးပွား အတွက် ဆက်သုံးရမယ်။
အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေကိုအသုံးလျှော့ ပ စ်မှာ။အဓိက ငွေကုန်တာ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ အဲဒီတော့ လော င် စာဆီ ကို မကြာခင် က န့် သ တ် လာလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာ ခင်ဗျားမှာ ပိုက်ဆံရှိလည်း ခွဲတ မ်းနဲ့ပဲ ဝယ်ရလိမ့်မယ်။ ATM တန်းစီသလို ဓာတ်ဆီ ထု တ် ဖို့ တန်းစီချင် စီရမယ်။… ATM လိုပေါ့ ခင်ဗျား တန်းမစီချင်ရင်၊ များများ သွားချင်ရင် မှော င် ခို ဝယ်ရမယ်။ ဆီ မှော င်ခိုတွေ ပေါ်လာမယ်။အခု ကမ္ဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီး စားနေ၊ ဝတ်နေတာတွေက $ နိုင်ငံခြားငွေ အရမ်းကုန်တယ်၊
အဲဒါကြောင့် Import သွ င်း ကုန် တွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု က န့် သ တ်လိမ့်မယ်။ပြီးရင် ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးပါ ဆိုတာ.. ပြန်လာမယ်။အဲဒီတော့ စားသုံးသူ အခွင့်အရေးပျော က် လာမယ်။Product/ Service ရွေးချယ်ခွင့် မရှိတော့ဘဲ ကောင်းကောင်းညံ့ညံ့ သုံးရလိမ့်မယ်။တကယ့် နိုင်ငံ တကာ MNC တွေက အခုအခြေအနေကြည့်နေတာ၊အကယ်၍ SAC အာဏာတည်မြဲပြီဆို သူတို့ အစိုးရ က Sanctions တွေနဲ့ ထုမှာ၊ ထုံးစံအတိုင်း Coca Cola,… Heineken, KFC … တွေက ပြန်ထွက်သွားမှာ။အဲဒီမှ
ာ Marketing Industry တစ်ခုလုံးပြိုဆ င်းသွားမယ်။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Marketing ဆိုတာက ယှဉ်ပြိုင်ဈေး ကွ က် ရှိမှ လုပ်ကြတာ။ကောင်းကောင်းညံ့ညံ့ သူ့ပစ္စည်းပဲ သုံးစရာရှိရင် ဘယ်သူမှ Service/ Marketing မလုပ်ဘူး၊အဲဒီမှာ Digital Markeing ပညာရပ်တွေ၊…. Offline Marketing တွေ မလိုတော့ဘူး၊ နိုင်ငံတကာ Billboard တွေနေရာမှာ တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မ တော်သာ အဖ/ ပြည့်အင်အားဟာ ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိသည် စတာတွေပဲ
နေရာယူလာလိမ့်မယ်။အခု ပညာ တတ်ဆိုတဲ့ White-Collar လူတန်းစား အများစု ဝင်ငွေ/ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၇၀% လောက်… ပျော က်သွားမယ်။လူတန်းစေ့ ပြန်နေချင်ရင် နိုင်ငံခြားပြန်ထွက် ကြရလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်မှာ တကယ်ငွေသုံးတာ အဲဒီလူတန်းစား၊သူတို့ဆီက cashflow ရပ်ပြီဆို ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊စားသောက်ဆိုင်တွေ၊Online Shopping တွေ အကုန်မျိုး က န်း သွားမယ်။ငွေ မသုံးနိုင်တော့ဘူးလေ။အစစ အရာရာ ခြိုးခြံချွေတာမှဆိုတဲ့..
ဘဝ ကို ခင်ဗျားနေ့စဉ် သွားရမယ်။Personal Development, Entrepreneur စွန့်ဦးတီထွင် ဆိုတာတွေ အကုန်လစ်၊ တတ်ဖို့ထက် “ကပ်” ဖို့ပဲ လိုတဲ့ခေတ်မှာ ပညာရှင်/ ပညာတတ်တွေ မရှင်သန်နိုင်ဘူး။အဲဒီအတွက် MBA လို Higher Level Education တွေလည်း ဈေးကွက်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။…. အထည်ချုပ်လို အရေးပါတဲ့ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တွေ ပိ တ် ပြီးထွက်လိမ့်မယ်။ဆ င်း ရဲ မွဲတေ မှု က တွန်းပို့ရင် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ သိချင် အခုပါရမီလမ်းပေါ် သွားကြည့်၊ မြင်ရခဲသွားတဲ့
ပြ ည့် တ န် ဆာ လုပ်ငန်း လမ်းပေါ်အပြည့် ပြန်ရောက်နေပြီ။မအလ ဟာ အဲဒီလမ်းကို တကယ်သွားနေတာနော်၊… အလုံးစုံ ပျ က် သု ဉ်း ရေး၊ အထီးကျန် နိုင်ငံ တကယ်သွားနေတာ။ အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်လား သူအောင်မြင်နိုင်လား? ဆိုရင် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ က န့် သ တ် ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ၁၀ နှစ်ပွင့်လင်းထားတဲ့ နိုင်ငံကို ချော က် ထဲ ပြ န် ဆွဲ ချလို့ မရဘူး။
အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်၊ င တ် တဲ့သူင တ် ဖြစ်လာရင်… သူသေ ကိုယ်သေ ထ ချ တဲ့နေ့ ရောက်လာမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေး ဟာ ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုတော့ ရှိတယ် … အာဏာရှင်အောက် ရသမျှလည် ပတ်ကြည့်မယ် ဆိုပြီး တော်လှန်ရေး ကို လျှော့တဲ့သူ များရင် တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ဖို့ အရမ်းကြာသွားမယ်။သို့မဟုတ်… NUG, PDF လည်း
အချိန်တန် အား န ည်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်လို့ င တ်တဲ့ တစ်နေ့ကျ ထ ချ ကြဦး မှာပဲ။အဲဒီကျမှ ဆိုရင် အ ထိ အခို က် အ ကျ အဆုံး ဒီထက် အများကြီးပိုများလိမ့်မယ်။NUG ရော၊ ပြည်သူရော လုပ်လို့ရသမျှ အကုန်အခုအချိန် အား ထ ည့်ပြီး လုပ်ရင် တော် လှန်ရေးဟာ… အောင်မြင်နိုင်ချေ၊ အထိ အခို က် နည်းနိုင်ချေ အများဆုံးပဲ။တော်လှန်ရေး က
လုပ်တဲ့သူတွေ လုပ်လိမ့်မယ်၊ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဆိုပြီး ကိုယ့်အတ္တတစ်ခုတည်းနဲ့ Personal Development နဲ့ ကိုယ့် စီးပွားရေး ကိုပဲ လှိမ့်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ရှိလာပြီ။…. အဲဒီလိုလူတွေ များလာရင် တော်လှန်ရေးဟာ မှု န် ဝါးသွားလိမ့်မယ်။အဲဒီကျရင် မအလ ပေးတဲ့ ဒု က္ခ တွေဟာ ကိုယ့်အိမ်တံခါးဝ ရောက်လာမှာပဲ၊ နေသာသလို နေရင်း တော်လှန်ရေးကြီး ဘယ်တော့ အောင်မြင်မှာလဲ Facebook ပေါ် တက်ရှာနေလို့တော့ မရဘူးရယ် … ။..
စဈကောငျစီ့ ဖဖေျောဝါရီကတညျးက အခုထိ တစိုကျမတျမတျသှားနတေဲ့ သတိပွုစရာဗြူဟာရဲ့ ဦးတညျခကျြ… ( ဖွဈလာမယျလို့ ပွောတာမဟုတျပမေဲ့ ဖွဈလာရငျတော့ အကုနျနားကားပွီသာ မှတျ)
ဖွဈလာမယျလို့ ပွောတာမဟုတျ၊ မအလတို့ရဲ့ ဖဖေျောဝါရီကတညျးက အခုထိ တစိုကျမတျမတျသှားနတေဲ့ ဗြူဟာ ကို ပွောခငျြတာရယျ … သွဇီနဲ့ စကားပွောတော့ ဒုခြုပျစိုးဝငျး က ပိ တျ ဆို့မှုတှကေို အလေးမထားဘဲ အရငျကလညျး အတှေ့ အကွုံရှိခဲ့သလို မိတျဆှနေိုငျငံအခြို့နဲ့ပဲ ရှဆေ့ကျသှားမယျလို့ ပွောလိုကျတယျ။ကမ်ဘာမှာ အဲဒီလိုနိုငျငံကို တံခါးပိတျဝါဒ ကငျြ့သုံးတဲ့
အထီးကနျြ နိုငျငံတှလေို့ ချေါတယျ။ အထငျရှားဆုံးကတော့ မွောကျကိုရီးယား ပေါ့။.. မနကေ့ ကြုံပြျော ဖွဈစဉျကို အာဆီယံက အဖှဲ့တှရေောကျနခြေိနျမှာကို ဖွဈတယျ၊သတငျးကလညျး ကမ်ဘာကိုတနျးပွနျ့တယျ။အခုလညျး ဒီမောဆိုမှာ ဘုရားရှိခိုးကြောငျး ကို လ ကျ န ကျ ကွီးနဲ့ထုတယျ၊စာသငျ ကြော ငျးလို နရောမြိုးတှေ မီးရှို့ တယျ။အဓိပ်ပာယျက UN/US/EU မပွောနဲ့ အနီးဆုံး သူ့ကို ကာကှယျပေးနတေဲ့… အာဆီယံဆီကတောငျ Legit_imacy ရဖို့ သိပျဂရုမစိုကျဘူး ဆိုတဲ့သဘောပဲ။NLD ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲလိ မျ တယျ ဆိုတာ
သကျသပွေဖို့ မဲစာရငျး အတုတှေ လုပျပွီးပွီလို့ သိရတယျ။ပွီးရငျ NLD ရဲ့ ထိပျ တနျးခေါငျးဆောငျတှကေို နှဈရှညျ ထော ငျ ခြ မယျ။NLD ကို ဖြ ကျ သိ မျး မယျ၊ ပွီးရငျ ၂၀၀၈ ခွဥေကို…. လိုသလောကျပွငျမယျ၊ ရှေးကောကျပှဲကို PR စနဈပွောငျးမယျ။ ပွီးရငျ PR ရှေးကောကျပှဲကို YMBA ကနဖွေဈဖွဈ ဝငျပွီး သမ်မတနရောကို ကူးမယျ။ ဒါ သူတို့ Road Map … မအလ ဟာ
ဒီရကျပိုငျး ဆပျပွာလိုမြိုး ပွညျတှငျးထုတျကုနျတှေ ထုတျတာ ကို လိုကျကွညျ့တ ယျ။အရငျရကျက ဆပျပွာ၊ ဆပျပွာမှုနျ့၊ နို့မှုနျ့ တှကေို.. မွဝတီဘကျကနေ အဝငျ ပိ တျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ? တကယျတော့ မွနျမာစဈတပျဟာ ၂၀၁၀-၂၀၂၁ ကွားကာလနဲ့ ဒီမိုကရစေီ ခတျေမှာ နိုငျငံခွားငှကေို အငျတို ကျ အား တို ကျ သုံးခှငျ့ရခဲ့တယျ။အခု အထီးကနျြ နိုငျငံဖွဈပွီဆိုရငျ အရှားပါးဆုံးဟာ နိုငျငံခွားငှပေဲ၊ အဲဒီတော့ နိုငျငံခွားငှေ ကို စဈရေးအတှကျ၊… သူတို့ အကြိုးစီးပှား အတှကျ ဆကျသုံးရမယျ။
အဲဒီတော့ ပွညျသူတှကေိုအသုံးလြှော့ ပ ဈမှာ။အဓိက ငှကေုနျတာ စှမျးအငျကဏ်ဍ အဲဒီတော့ လော ငျ စာဆီ ကို မကွာခငျ က နျ့ သ တျ လာလိမျ့မယျ။ဆိုလိုတာ ခငျဗြားမှာ ပိုကျဆံရှိလညျး ခှဲတ မျးနဲ့ပဲ ဝယျရလိမျ့မယျ။ ATM တနျးစီသလို ဓာတျဆီ ထု တျ ဖို့ တနျးစီခငျြ စီရမယျ။… ATM လိုပေါ့ ခငျဗြား တနျးမစီခငျြရငျ၊ မြားမြား သှားခငျြရငျ မှော ငျ ခို ဝယျရမယျ။ ဆီ မှော ငျခိုတှေ ပျေါလာမယျ။အခု ကမ်ဘာနဲ့ရငျပေါငျတနျးပွီး စားနေ၊ ဝတျနတောတှကေ $ နိုငျငံခွားငှေ အရမျးကုနျတယျ၊
အဲဒါကွောငျ့ Import သှ ငျး ကုနျ တှကေို တဈခုပွီး တဈခု က နျ့ သ တျလိမျ့မယျ။ပွီးရငျ ပွညျတှငျးဖွဈကို အားပေးပါ ဆိုတာ.. ပွနျလာမယျ။အဲဒီတော့ စားသုံးသူ အခှငျ့အရေးပြော ကျ လာမယျ။Product/ Service ရှေးခယျြခှငျ့ မရှိတော့ဘဲ ကောငျးကောငျးညံ့ညံ့ သုံးရလိမျ့မယျ။တကယျ့ နိုငျငံ တကာ MNC တှကေ အခုအခွအေနကွေညျ့နတော၊အကယျ၍ SAC အာဏာတညျမွဲပွီဆို သူတို့ အစိုးရ က Sanctions တှနေဲ့ ထုမှာ၊ ထုံးစံအတိုငျး Coca Cola,… Heineken, KFC … တှကေ ပွနျထှကျသှားမှာ။အဲဒီမှ
ာ Marketing Industry တဈခုလုံးပွိုဆ ငျးသှားမယျ။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Marketing ဆိုတာက ယှဉျပွိုငျဈေး ကှ ကျ ရှိမှ လုပျကွတာ။ကောငျးကောငျးညံ့ညံ့ သူ့ပစ်စညျးပဲ သုံးစရာရှိရငျ ဘယျသူမှ Service/ Marketing မလုပျဘူး၊အဲဒီမှာ Digital Markeing ပညာရပျတှေ၊…. Offline Marketing တှေ မလိုတော့ဘူး၊ နိုငျငံတကာ Billboard တှနေရောမှာ တပျမတျောသာ အမိ၊ တပျမ တျောသာ အဖ/ ပွညျ့အငျအားဟာ ပွညျတှငျးမှာသာ ရှိသညျ စတာတှပေဲ
နရောယူလာလိမျ့မယျ။အခု ပညာ တတျဆိုတဲ့ White-Collar လူတနျးစား အမြားစု ဝငျငှေ/ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျး ၇၀% လောကျ… ပြော ကျသှားမယျ။လူတနျးစေ့ ပွနျနခေငျြရငျ နိုငျငံခွားပွနျထှကျ ကွရလိမျ့မယျ။မွနျမာပွညျမှာ တကယျငှသေုံးတာ အဲဒီလူတနျးစား၊သူတို့ဆီက cashflow ရပျပွီဆို ခရီးသှားလုပျငနျး၊စားသောကျဆိုငျတှေ၊Online Shopping တှေ အကုနျမြိုး က နျး သှားမယျ။ငှေ မသုံးနိုငျတော့ဘူးလေ။အစစ အရာရာ ခွိုးခွံခြှတောမှဆိုတဲ့..
ဘဝ ကို ခငျဗြားနစေ့ဉျ သှားရမယျ။Personal Development, Entrepreneur စှနျ့ဦးတီထှငျ ဆိုတာတှေ အကုနျလဈ၊ တတျဖို့ထကျ “ကပျ” ဖို့ပဲ လိုတဲ့ခတျေမှာ ပညာရှငျ/ ပညာတတျတှေ မရှငျသနျနိုငျဘူး။အဲဒီအတှကျ MBA လို Higher Level Education တှလေညျး ဈေးကှကျပွောကျသှားလိမျ့မယျ။…. အထညျခြုပျလို အရေးပါတဲ့ ပွညျပရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု တှေ ပိ တျ ပွီးထှကျလိမျ့မယျ။ဆ ငျး ရဲ မှဲတေ မှု က တှနျးပို့ရငျ ဘာတှေ ဆကျဖွဈမလဲ သိခငျြ အခုပါရမီလမျးပျေါ သှားကွညျ့၊ မွငျရခဲသှားတဲ့
ပွ ညျ့ တ နျ ဆာ လုပျငနျး လမျးပျေါအပွညျ့ ပွနျရောကျနပွေီ။မအလ ဟာ အဲဒီလမျးကို တကယျသှားနတောနျော၊… အလုံးစုံ ပြ ကျ သု ဉျး ရေး၊ အထီးကနျြ နိုငျငံ တကယျသှားနတော။ အဲဒီတော့ ဖွဈနိုငျလား သူအောငျမွငျနိုငျလား? ဆိုရငျ လုံးဝ မဖွဈနိုငျဘူး။ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ က နျ့ သ တျ ဒီမိုကရစေီ နဲ့ ၁၀ နှဈပှငျ့လငျးထားတဲ့ နိုငျငံကို ခြော ကျ ထဲ ပွ နျ ဆှဲ ခလြို့ မရဘူး။
အလုပျ လကျမဲ့ဖွဈတဲ့သူဖွဈ၊ င တျ တဲ့သူင တျ ဖွဈလာရငျ… သူသေ ကိုယျသေ ထ ခြ တဲ့နေ့ ရောကျလာမှာပဲ။ ဒါပမေယျ့ နှဦေးတျောလှနျရေး ဟာ ဖွဈနိုငျခနြှေဈခုတော့ ရှိတယျ … အာဏာရှငျအောကျ ရသမြှလညျ ပတျကွညျ့မယျ ဆိုပွီး တျောလှနျရေး ကို လြှော့တဲ့သူ မြားရငျ တျောလှနျရေး အောငျမွငျဖို့ အရမျးကွာသှားမယျ။သို့မဟုတျ… NUG, PDF လညျး
အခြိနျတနျ အား န ညျးပြောကျကှယျသှားလိမျ့မယျ။နောကျဆုံး ဘယျလိုမှ မခံနိုငျလို့ င တျတဲ့ တဈနကြေ့ ထ ခြ ကွဦး မှာပဲ။အဲဒီကမြှ ဆိုရငျ အ ထိ အခို ကျ အ ကြ အဆုံး ဒီထကျ အမြားကွီးပိုမြားလိမျ့မယျ။NUG ရော၊ ပွညျသူရော လုပျလို့ရသမြှ အကုနျအခုအခြိနျ အား ထ ညျ့ပွီး လုပျရငျ တျော လှနျရေးဟာ… အောငျမွငျနိုငျခြေ၊ အထိ အခို ကျ နညျးနိုငျခြေ အမြားဆုံးပဲ။တျောလှနျရေး က
လုပျတဲ့သူတှေ လုပျလိမျ့မယျ၊ တျောလှနျရေး အောငျမွငျရငျ အဆငျသငျ့ဖွဈအောငျ ဆိုပွီး ကိုယျ့အတ်တတဈခုတညျးနဲ့ Personal Development နဲ့ ကိုယျ့ စီးပှားရေး ကိုပဲ လှိမျ့လုပျနတေဲ့သူတှေ ရှိလာပွီ။…. အဲဒီလိုလူတှေ မြားလာရငျ တျောလှနျရေးဟာ မှု နျ ဝါးသှားလိမျ့မယျ။အဲဒီကရြငျ မအလ ပေးတဲ့ ဒု က်ခ တှဟော ကိုယျ့အိမျတံခါးဝ ရောကျလာမှာပဲ၊ နသောသလို နရေငျး တျောလှနျရေးကွီး ဘယျတော့ အောငျမွငျမှာလဲ Facebook ပျေါ တကျရှာနလေို့တော့ မရဘူးရယျ … ။
လကျထပျပွီး ၂လအကွာတှငျမှ ခငျပှနျးဖွဈသူထံတှငျ အခွားယောကျြားလေးတဈဦးနှငျ့ရညျးစားဖွဈနမှေနျး သိလိုကျရသော အမြိုးသမီးတဈဦး၏ ရငျနာဖှယျဖွဈရပျ
ကှငျးရှောငျကာ မောငျးခဲ့ပမေယျ့လဲ လိုကျလံတိုကျတဲ့ ထှအေုပျကားကွောငျ့သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ တဈနှဈအရှယျ သမီးလေး